မုန့်ဟင်းခါးထဲ ထည့်ထည့်စားနေကြတဲ့ အကြော်ရဲ့ ကြောက်စရာ - Apannpyay Media
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ July 16, 2018
မုန့်ဟင်းခါးထဲ လူတိုင်းလိုလို ထည့်စားတတ်တဲ့ အကြော်ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ
မြန်​မာတွေကြိုက်​လှတဲ့ မုန့်​ဟင်းခါးမှာ ပါတဲ့ အ​ကြော်​ ဘယ်​​လောက်​​ကြောက်​ဖို့​ကောင်းလဲ
ဒီ​နေ့ ​မြောက်​ပြင်​ဘက်​သွားရင်း မုန့်​ဟင်းခါးသည်​မြင်​​တော့ ဗိုက်​ဆာတာနဲ့ ဝင်​စားမိတယ်​… ​အရမ်းကြိုက်​တာလဲ ပါတာ​ပေါ့….
ဟယ်​ ​ကောင်းတယ်​ ​ကောင်းတယ်​ဆိုပီးအ​ကြော်​ပို​လေးနဲ့ ဟင်းရည်​​လေး​တောင်​ ​တောင်း​သောက်​လိုက်​​သေးတယ်​….
အ​ကြော်​​လေးက​ကောင်းလိုက်​တာဆိုပီး အ​ကြော် ​လေး ၂၀၀ဖိုး အပို​ရောင်း​ပေး​ပါဆိုပီး စားမိ​တော့ အရမ်းကြိုက်​ပီးအထုတ်​ကြီး တထုတ်​​လောက်​ ထပ်​​ရောင်း​ပေးပါ လို့ ဝယ်​​ရော….
အပိုမရှိတာမို့ ​ရောင်း​ပေးလို့မရလို့ပါတဲ့ အာ့နဲ့ ကိုယ်​​တွေကလည်းကြိုက်​မိရင်​ဇွတ်​ဆို​တော့ ပိုက်​ဆံ ​ပေးခဲ့ပါမယ်​ နက်​ဖြန်​မှ လာယူပါ့မယ်​​ပြောမိ​ရော…(သူ့အ​ကြော်​ကလည်း မွ ရွပြီး ​ကောင်းတာကို) ကိုယ်​ပုံကြည့်​ပီး ဇွတ်​စား​တော့မယ်​ရိပ်​မိသွားတဲ့ ဆိုင်​ရှင်​က ဘယ်​လိုစားမှာလည်းတဲ့ ….
အဲ့​တော့မှ ပလပ်​စတစ်​ထည့်​​ကြော်​တာ​နေမှာဆိုပီး လန့်​သွားတာ..
အာ့နဲ့ စားလက်​စ အ​ကြော်​ထုတ်​​လေး ​ဘေးချပီး အိမ်​အမြန်​ပြန်​​ပြေးပီး လက်​ထိုးအန်​ကြရ​ရော….
ဗိုက်​ထဲ​ရောက်​သွားရင်​ ဘယ်​လို ဖြစ်​သွားမလဲ သိချင်​စိတ်​နဲ့ ဖြဲ ရဲ ကြည့်​​တော့ အလား လား အ​ကြော်​​တွေက ပလပ်​စတစ်​လိုလို ရာဘာ လိုလို ဖြူဖြူ​တွေ လက်​နဲ့ ဖျစ်​လည်း မ​ကြေဘူး​နော်​…
အများကြီး ရက်​ရှည်​စားမယ်​ဆို အူပိတ်​တာတို့ အူကင်​ဆာတို့ အစာအိမ်​ကင်​ဆာတို့များ ဖြစ်​မလားပဲ…
အဲဒါနဲ့ အ​ကြော်​ထုတိ ကြီးယူပီး မီးဖို​ပေါ်တင်​ ပြုတ်​ကြည့်​ကြပြန်​​ရော…
အ​မလေး​လေး ၁၀မိနစ်​​လောက်​ ပြုတ်​တာ​တောင်​ ပုံစံ မပျက်​တဲ့ ကို​ရွေအ​ကြော်​​တွေကို ​လေ့လာကြည့်​ကြပါ…
လမ်း​ပေါ်မှာ ​ရောငိး​နေတဲ့ မုန့်​ဟင်းခါးဆိုင်​တိုင်း ဒီအ​ကြော်​​တွေ သုံးကြပါတယ်​…
တ​နေ့ တ​နေ့ လူ​တွေ ဘယ်​​လောက်​​တောင်​ စားမိ​နေလဲ….
အစားအ​သောက်​နဲ့ ပတ်​သတ်​ရင်​ ကိုယ်​​တွေအိမ်​က ငြုပ်​သီးမှုန့်ဆိုး​ဆေး အချိုမုန့်​ ဆီ အ​တော်​သတိထားကြ​ပေမယ့်​ လမ်း​ဘေးမှာ ကိုယ်​ကြိုက်​တာ​လေးမြင်​​တော့လည်း မ​နေနိုင်​မိတဲ့ အဖြစ်​ ​ကြောငိ့ အ​တော်​လန့်​သွားမိတယ်​….
လူ​တွေ လူ​တွေ တ​နေ့ တ​နေ့ ဘယ်​​လောက်​အဆိပ်​သင့်​​နေကြပီလဲ
Credit Thae Su Hlaing
မုနျ့ဟငျးခါးထဲ ထညျ့ထညျ့စားနကွေတဲ့ အကွျောရဲ့ ကွောကျစရာ
မုနျ့ဟငျးခါးထဲ လူတိုငျးလိုလို ထညျ့စားတတျတဲ့ အကွျောရဲ့ ကွောကျမကျဖှယျရာ
မွနျ​မာတှကွေိုကျ​လှတဲ့ မုနျ့​ဟငျးခါးမှာ ပါတဲ့ အ​ကွျော​ ဘယျ​​လောကျ​​ကွောကျ​ဖို့​ကောငျးလဲ
ဒီ​နေ့ ​မွောကျ​ပွငျ​ဘကျ​သှားရငျး မုနျ့​ဟငျးခါးသညျ​မွငျ​​တော့ ဗိုကျ​ဆာတာနဲ့ ဝငျ​စားမိတယျ​… ​အရမျးကွိုကျ​တာလဲ ပါတာ​ပေါ့….
ဟယျ​ ​ကောငျးတယျ​ ​ကောငျးတယျ​ဆိုပီးအ​ကွျော​ပို​လေးနဲ့ ဟငျးရညျ​​လေး​တောငျ​ ​တောငျး​သောကျ​လိုကျ​​သေးတယျ​….
အ​ကွျော​​လေးက​ကောငျးလိုကျ​တာဆိုပီး အ​ကွျော ​လေး ၂ဝဝဖိုး အပို​ရောငျး​ပေး​ပါဆိုပီး စားမိ​တော့ အရမျးကွိုကျ​ပီးအထုတျ​ကွီး တထုတျ​​လောကျ​ ထပျ​​ရောငျး​ပေးပါ လို့ ဝယျ​​ရော….
အပိုမရှိတာမို့ ​ရောငျး​ပေးလို့မရလို့ပါတဲ့ အာ့နဲ့ ကိုယျ​​တှကေလညျးကွိုကျ​မိရငျ​ဇှတျ​ဆို​တော့ ပိုကျ​ဆံ ​ပေးခဲ့ပါမယျ​ နကျ​ဖွနျ​မှ လာယူပါ့မယျ​​ပွောမိ​ရော…(သူ့အ​ကွျော​ကလညျး မှ ရှပွီး ​ကောငျးတာကို) ကိုယျ​ပုံကွညျ့​ပီး ဇှတျ​စား​တော့မယျ​ရိပျ​မိသှားတဲ့ ဆိုငျ​ရှငျ​က ဘယျ​လိုစားမှာလညျးတဲ့ ….
အဲ့​တော့မှ ပလပျ​စတဈ​ထညျ့​​ကွျော​တာ​နမှောဆိုပီး လနျ့​သှားတာ..
အာ့နဲ့ စားလကျ​စ အ​ကွျော​ထုတျ​​လေး ​ဘေးခပြီး အိမျ​အမွနျ​ပွနျ​​ပွေးပီး လကျ​ထိုးအနျ​ကွရ​ရော….
ဗိုကျ​ထဲ​ရောကျ​သှားရငျ​ ဘယျ​လို ဖွဈ​သှားမလဲ သိခငျြ​စိတျ​နဲ့ ဖွဲ ရဲ ကွညျ့​​တော့ အလား လား အ​ကွျော​​တှကေ ပလပျ​စတဈ​လိုလို ရာဘာ လိုလို ဖွူဖွူ​တှေ လကျ​နဲ့ ဖဈြ​လညျး မ​ကွဘေူး​နျော​…
အမြားကွီး ရကျ​ရှညျ​စားမယျ​ဆို အူပိတျ​တာတို့ အူကငျ​ဆာတို့ အစာအိမျ​ကငျ​ဆာတို့မြား ဖွဈ​မလားပဲ…
အဲဒါနဲ့ အ​ကွျော​ထုတိ ကွီးယူပီး မီးဖို​ပျေါတငျ​ ပွုတျ​ကွညျ့​ကွပွနျ​​ရော…
အ​မလေး​လေး ၁ဝမိနဈ​​လောကျ​ ပွုတျ​တာ​တောငျ​ ပုံစံ မပကျြ​တဲ့ ကို​ရှအေ​ကွျော​​တှကေို ​လလေ့ာကွညျ့​ကွပါ…
လမျး​ပျေါမှာ ​ရောငိး​နတေဲ့ မုနျ့​ဟငျးခါးဆိုငျ​တိုငျး ဒီအ​ကွျော​​တှေ သုံးကွပါတယျ​…
တ​နေ့ တ​နေ့ လူ​တှေ ဘယျ​​လောကျ​​တောငျ​ စားမိ​နလေဲ….
အစားအ​သောကျ​နဲ့ ပတျ​သတျ​ရငျ​ ကိုယျ​​တှအေိမျ​က ငွုပျ​သီးမှုနျ့ဆိုး​ဆေး အခြိုမုနျ့​ ဆီ အ​တျော​သတိထားကွ​ပမေယျ့​ လမျး​ဘေးမှာ ကိုယျ​ကွိုကျ​တာ​လေးမွငျ​​တော့လညျး မ​နနေိုငျ​မိတဲ့ အဖွဈ​ ​ကွောငိ့ အ​တျော​လနျ့​သှားမိတယျ​….
လူ​တှေ လူ​တှေ တ​နေ့ တ​နေ့ ဘယျ​​လောကျ​အဆိပျ​သငျ့​​နကွေပီလဲ